OGAALKA SOOMAALI WEYN.W/Q.C/naasir Guray Meecaad.q11aad. |
OGAALKA SOOMAALI WEYN.W/Q.C/naasir Guray Meecaad.q11aad.
Hargeisa(GNN):-Talyaanigii ciidamo badan ayuu ku soo dejiyay degmooyinkii uu
u arkayay in ay ahmiyad istraateejiyadeed u leeyihiin weerarada uu ku doonayay in uu ku gumeeyo degaanka iyo dadkiisa. Degmooyinka uu markaas ciidamadiisa fariisiyey waxaa kamid ahaa Boosaaso iyo Xaafuun. Sheekooyinka odey ka-sheekeega ah ee ka waramaya dagaallada xilligaas dhacay waxaa kamid ah fal ka dhacay degmada Boosaaso. Koox dagaalyahanno ah ayaa weerar dhuumaaleysi ah ku soo qaadey meel Boosaaso bannaankeeda ah. Ujeeddadoodu waxay ahayd in ay furtaan qori ah kuwa daran-dooriga u dhaca (Bam-bam). Kooxdan oo kamid ahaa ciidamadii boqorka ayaa waxaa odey u ahaa nin la yiraahdo Xirsi Koora-yare. Talada ay ku duulayeen waxaa lahaa nin la yiraahdo Cali-Xarbi Yuusuf Boqor oo ciidanka la socdey. Isagu wuxuu ahaa nin dhallin-yar oo ku caan ahaa geesinimo. Waxaa awoowe u ahaa Boqor Cismaan.
Kooxdan dhallinyarada ah waxay khabar ku heleen in ay jiraan baqlo ay ku socdaan saraakiisha Talyaaniga ah oo Boosaaso ku sugan. Baqlahaas ayaa subaxii iyo galabtii waxaa la daajiyaa togga la yiraahdo Baalade ee hadda ku dhinac yaal gegida dayuuradaha ee Boosaaso. Daaq fiican oo toggaasi uu lahaa darteed, ayaa baqlaha loo keeni jiray si ay u meyracdaan. Qoriga bam-bamka ah wuxuu kamid ahaa qoryaha lagu ilaaliyo magaalada.
Dhallinyaradan weerarka ku tashatay waxaa kamid ahaa Khaalid Aw-Muuse, Yuusuf Maxamad Xaaji, Xaaji Yuusuf Maxamuud Sharmaarke, Cabdalle Bakhti, Maxamad Cilmi Daad, Muuse Yuusuf Boqor (oo isagu goor danbe la boqri doono) iyo rag kale. Goor habeen ah ayay lug kaga soo baxeen dooxadii Dharoor. Subaxnimadii intuusan waagu weli baryin ayay yimaadeen toggii Baalade. Xilligu wuxuu ahaa xagaa oo kuleyl daran ayaa jiray. Dhulku malahan meel gabbaad ah oo qorraxda laga har-galo. Kaliishii ayaa toos u heshey. Goor ay barqadii tahay ayaa baqlihii magaalada laga soo saarey. Caaqil Maxamuud Siciid Aw-Muuse oo sheekadan aanu ka soo xiganay, wuxuu yiri:
“Togga Baalade oo hadda ku dhinac yaal magaalada Boosaaso ayay dagaalyahanniintii fariisteen, halkaas oo waagii uu ugu baryay. Waxay goobtii ku gaareen qiyaas saddexdii saac oo barqadii ah. Markaas dabadeed ayaa baqlihii ay magaalada ka soo baxeen. Saddex saac oo meeshu ay xeeb tahah oo xilligu uu xagaa yahay, dhibaatadeeda ayay leedahay. Baqlihii, ciidan aan xooganeyn ayaa ka soo hor-maray. Ciidankii yaraa ee la socdey baqlaha, markii ay togga ku soo dhamaadeen ayaa waxaa heley dagaal dhuumaaleysi ah oo ayan fileyn. Markii ay tacshiiraddu bilaabatay, baqlihii waa ay kala carareen. Ciidankiina dib ayay u yaaceen. Waxaa goobtii lagu diley tobaneeye ciidankii Talyaaniga ahaa “. (Waxaan ka soo xiganay wareysi aanu la yeelanay Caaqil Maxamuud Siciid Aw-Muuse. 19/ 4- 2010. Boosaaso – Soomaaliya).
Ciidankii Talyaaniga oo habqan ah ayaa dhankii magaalada ku cararay. Dagaalyahaniintii waa ay raacdeysteen, laakiin waxaa gadaal ka soo xabadeeyey nin ay geeri ahaan uga tageen aanse waxba qabin. Isagu carab ayuu ahaa u dhashay dalka Liibiya, kaas oo ka tirsanaa ciidamada Talyaaniga. Wuxuu iska dhigey nin meyd ah. Goortii ay orod ku dhaafeen ayuu tacshiirad qabadsiiyay. Dagaalyahaniintii nin ayaa goobtii kaga dhaawacmay. Kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Maxamad Xaaji. Askarigii Liibiga ahaa ayay dib ugu soo laabteen oo ay dileen. Kooxdii dagaalyahaniinta ahaa dib ayay dhaawacoodii ula soo laabteen. Inkasta oo qorigii waynaa ayan helin misana qoryo kel ayay gacanta ku dhigeen.
Markii ay dhowr km. la soo socdeen dhaawacoodii, waxay gabbaad ka dhigteen dhagax dhinac-yaal buurta la yiraahdo Buur Tuugo oo dhanka koonfureed kaga aaddan gegida dayuuradaha ee Boosaaso. Iyaga oo nasiino ku jira ayaa meel u dhow oo dushooda ah waxaa uga muuqdey laba nin.
“ Waxay moodeen ilaaladii Talyaaniga ugu jiray buuraha. Laakiin labada wiil waxay ahaayeen geel-jire Soomaaliyeed oo laba halaad oo ay lahaayeen uu Talyaanigu ka dhacay, dabadeedna uu magaalada la galey. Laakiin dagaalyahanniintii waxay moodeen niman ah askar Talyaani. Xirsi Koora-yare ayaa markiiba xabbad ku furey dhankoodii. Mid ayuu ka diley. Xabbaddii yeertey ayaa ciidan Talyaani ah oo buurta meel shishe ka saaran ku soo baraarugeen. Waxay bilaabeen in ay xabbado ku soo ridaan dhankii dagaalyahannada. Xirsi Koora-yare oo isagu ahaa hoggaamiyihii kooxda, ayay labada bowdyo jebisey ”. (Waxaan ka soo xiganay wareysi aanu la yeelanay Caaqil Maxamuud Siciid Aw-Muuse. 19/ 4- 2010. Boosaaso – Soomaaliya).
Khaalid Aw-Muuse ayaa wuxuu damcay in uu Xirsi qaado. Xirsi waa uu diidey oo wuxuu yiri: Khaalidow lafahaaga la baxso. Xabbad labaad baa soo dhacdey oo Khaalid bey ….. kaga dhacdey. Xirsi ayaa markaas dhawaaqey oo Khaalid ku yiri: Meel xille Allaha ku dhigee orod oo iga tag. Khaalid waa uu soo baxay. Raggiina waa lakala yaacay. Caaqil Maxamuud oo sheekadan ka warinaya adeerkiis Khaalid Aw-Muuse wuxuu yiri:
“ Khaalid Aw-Muuse wuxuu igu yiri: Raggii waa uu kala baxsadey. Aniguna goortaan soo baxsadey, waxaa ii muuqdey mara cad oo ka baf-baf leh geed dhirin-dhir ah dushiis. Waan eegey, mase Cali-Xarbi oo miyir la’ ayaa hoos jiifa. Waxaa miyir tirey harraad ”. (Isla-marjicii hore).
Inkasta oo Cali-Xarbi uu ahaa nin xoog wayn, misana Khaalid qudhiisu waa uu xoogganaa oo waa uu qaadey. Dhagax gudaadka xeebta yaal ayuu ku kala rogey. Wuxuu sii sideyba wuxuu geeyey dhagcaan oo biyihiisu ay badda kaga shubaan gegida dayuuradaha dusheeda. Halkaas ay labada biyood isaga darsoomaan. Meel biyaha dhexdeeda ah oo uunu ku hafan, diirimaadna uu ka helo ayuu Khaalid dhigey saaxiibkiis. Dabadeed waa uu socdey oo wuxuu dooney raggii ciidanka ahaa. Meel laas ah oo uu yiqiin ayuu ugu tegey. Xabbad ayuu dushoodii ka ridey oo dhamaantood khasab ku soo kexeeyey. Nin waliba shaatigii uu qabay ayuu soo qooyay oo biyo ku soo qaadey. Biyahaas ayay ula tageen Cali Xarbi oo afkiisii ku gororiyeen.
Galabnimadii ayaa Cali-Xarbi ay naftii ku soo noqotey. Taasina waxay ka danbeysey markii uu nastay biyona heley. Dabadeed si ay raashin u helaan ayuu wuxuu yiri:
“ Intiina kale jooga. Aniga, Khaalid Aw-Muuse iyo Maxamuud Cilmi Daad ayaa baxayna. Waxaanu neef ka soo qalaneynaa qoyskii reer hebel ahaa ”.(Isla-marjicii hore).
Reerka ay doonayaan in ay xoog uga loogtaan waa qoys ku caan ahaa in ay raaceen Talyaaniga. Xabbadihii saaka yeerey darteed ayay la guureen oo waxay ku sii socdeen xadka u dhexeeyay maamulka Talyaaniga iyo maamulka Ingiriiska. Sidii ayay saddexdii nin kaga daba-tageen reerihii oo sii qaxaya. Iyagu waxay markaas u qaxayeen degaanka uu Ingiriisku ka taliyo. Waxaa halkaas odey ka ahaa nin Ingiriis ah oo Soomaalidu ay magaciisa u yiqiineen Laaran. Neef geel ah ayay reerihii qaxay ka soo ka-xeysteen, kaas oo ay saaxiibadood ula yimaadeen. Goobtii ayay habeenkii ku loogteen hashii. Maxamuud Cilmi Daad oo dagaalyahaniintaas kamid ahaa ayaa dhacdadan gabey qurxoon ka tiriyay. Tixihiisii waxaa kamid ah sidan:
Legga dabar ladiidaha banka ah laabashada qoyska
Nin waliba libaax buu ahaa laafyihii gole’e
Leysteen maroodiya sidiis luqunta loo taagye
Marse haddii la looltamey kufriga amase leys-laayey
Libiqsiinadii hore haddey liifaddu istaagtey
Haddii aan labeebyadu baqeyn libin ma weyneyne
Waxaa loonka baas inagu gurey liidadkaan garane
Nin jinaadka loof lagala baxay laaqin wayn malehe
Sow Yuusuf liishaamintii gacan ma laad-laadin
Sow Cali sidii leys martiya reero kama loogan
Lasha-lash orodka sow looguma tegin Laaran xeradiisa
Alla sow qalbigi looshanaa dib uma soo laabmin (Maxamad Cilmi Daad)
Dagaalladii dhacay tan iyo dabayaaqadii sanadkii 1925-kii, dhaawac xooggan ayay ku keeneen dad-waynihii Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa degaanka. Waxaa dagaalladii ku dhintey dad gaaraya dhowr boqol oo qof. Tiro intaas le’egna waa ay ku dhaawacmeen. Degmooyin ahmiyad lahaana waa ay ku burbureen. Waxaa kaloo Talyaanigu uu la wareegey doonyo tiradoodu ay gaarayaan 80. Dad iyo wixii duunyo ahaa ee saarnaa meel ay ku danbeeyeen aanan la helin.
Talyaanigii, inkasta oo dhaawaca intaas le’eg uu u geystey dadkii ku dhaqnaa gobolka, misana isuma ayan dhiibin. Meel kasta oo uu cagaha dhigo wuxuu kala kulmayay gadood iyo kuleyl uu la nasan waayay. Dhowrkii bilood oo ugu horeeyey sanadkii 1926-kii, dagaallo dhuumaaleysi ah ayaa lagu harqiyay ciidamadii Talyaaniga. Markii uu gaari waayay guul uu ku naalloodo, wuxuu bilaabay in uu wax ka beddelo qorshihiisii dagaalka. Wuxuu markaan ku fekerey qorshe iskudey ah oo uu dhanka koonfureed uu weerar dhulka ah kaga soo qaado gobolka. Marka uu Talyaanigu qorshahan dooranayo, waa uu fahamsanaa qallafsanaanta uu leeyahay weerarka uu ka qaadayo jahadan koonfureed. Ciidamadii Daraawiishta oo ay colaad ka dhexeysey saldanadda Majeertiinya, ayaa awood u yeelan waayay in ay ka gudbaan aagaggaa hore oo ay fadhiyeen ciidamada boqorka. Doorashada Talyaaniga qorshahan waxay la xiriirtey caal-waa uu kala kulmay weeraradii uu badda ka soo qaadey.
“ Wixii ciidan ahaa oo uu ugu tala-galay saldanaddii Hobyo iyo kuwo cusub oo uu gobolka ka qoray oo lagu kordhiyay, waxaa loo soo wareejiyay dagaalkan cusub ee Majeertiinya. Wixii ciidan lugeed ahaa waxaa lagu soo ururshey Ilig iyo Eyl, halkaas oo maraakiib ay ku soo daad-gureeyeen. Qeybona lug ayay ku yimaadeen, waxaa kamid ahaa ciidan 1.200 duub-cad iyo baando ah. Waxaa hoggaaminayay Major Bechis ”. (Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Qaybta Koowaad. Khaalid Cali-Guul Warsame. 2010. s. 285).
Ciidamadii duub-cadda ahayd ee uu hor-kacayay Gaashaanle Bechis, iyaga oo raxamo ah ayay ka soo kaceen gobolka Hiiraan. Waxay afka saareen dhanka waqooyi, iyaga oo u soo kacay si ay uga qeyb qaataan dagaallada ka socda Majeertiinya. Degaanka Shiilaabo waxaa ku sugnaa kooxdii Fallaago oo aanan weli u gudbin gudaha gobolka Ogaadeenya. Gaashaanle Bechis markii uu ka war-heley in Fallaago ay ku sugan yihiin degaanka, wuxuu u direy koox 200 oo nin ah, kuwaas oo u badnaa Soomaali. Ciidankii Fallaago jid-gooyo ayay u galeen. Labadii ciidan (Fallaago iyo Duub-cad) waxay isku heleen meel la yiraahdo Baal-cadde markay taariikhdu ahayd 15/ 1- 1926-kii. Kadib markii jid-gooyo loo galay, ciidamadii Talyaaniga waxaa la gaarsiiyay dhaawac xooggan.
“ Talyaanigii waxay qirteen in dagaalkaas ay kaga dhinteen 58 nin oo Soomaali u badnaa. Waxaa laga dhaawacay 60 askari. Islamarkaas 30 askari waa la waayay oo waxay u qaateen in maxaabiis ahaan loo kexeystey ”. (Hirarkii Taariikhda iyo Halgankii Soomaalida. Qaybta Koowaad. Khaalid Cali-Guul Warsame. 2010. s. 259).
Ciidankan kooxihiisii soo badbaaday waxay kamid noqdeen xoogaggii lagu soo ururinayay magaalada Eyl ee badda iyo birriga lagu keeney. Waxaa halkaas leysugu keeney ciidan gaaraya lix guuto. Saddex guuto oo kamid ah waxay ahaayeen Soomaali oo waxaa laga soo qorey gobollada Benaadir, Jubbada Sare iyo Mudug. Saddexda guuto ee kale waxay ahaayeen ciidan laga keeney Ereteriya. Waxaa weheliyay lix kooxood oo madaafiicda ku dirirta. Farsamo yaqaano waxaa ka ahaa Talyaani iyo Carab. Taliska laga hagayay wuxuu dul saarnaa markab badda dhexdeeda ku sugan. Howl-galkan ayaa Talyaanigu wuxuu ku magacaabay Qorshihii Labaad. Waxaa odey looga dhigey sarkaal magaciisa la yiraahdo Leut./ Col. Bergesio. (Isla-marjicii hore 285).
15/ 3- 1926-kii, ciidankii la ururinayay wuxuu ku diyaargaroobey degmada Eyl. Ciidankan oo laba madax loo qeybiyay ayaa waajibkooda koowaad wuxuu ahaa in ay u dhaqaaqaan dhulka dooxooyinka ah ee degmada Eyl ka xiga dhanka waqooyi. Madaxa hore wuxuu u baxay Nugaal-Godan. Dabadeed qorshuhu wuxuu yahay in uu gaaro degmada Qardho. Madaxa labaad ee ciidanka, waxay u baxeen Iyax Geed-Gaaban. Waxaa tilmaantoodu ahayd in ay gaaraan Biya-caddo. Markii ay bilaabeen in ay dhaqaaqaan ayaa dhac iyo dulmi waxay ku bilaabeen dadkii reer miyiga ahaa. Ciidanku maahayn kuwo sahay fiican watay. Waxaa raashin u ahaa xoolaha ay ka dhacaan duddooyinka ay sii marayeen. Khaalid Cali Guul wuxuu ka sheekeeyey nin uu la kulmay oo la yiraahdo Cuuke oo la socdey ciidamada Talyaaniga. Ninkaasi wuxuu sheegey:
“ Maalin la soo dhacay xoolo ari ah oo gaaraya shan kun oo neef. Ciidanku wuxuu dhamaa 1.800 oo askari. Waxaa xoolihii qalliin lagu dhameeyey toban maalmood. Neef qura cidihii lahaa uma noqon “. (Isla-marjicii hore. S. 287)
Qallinka.c/naasir guray meecaad
xigasho.dr saadiq eenow.